नव नियुक्त कानूनमन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेद्वारा पदभार ग्रहण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्युठानमा टिप्पर दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु
दुई नेताले के गर्लान भनेर अब हेरेर बस्नु हुँदैन: शर्मा
बझाङ पहिरो अपडेट, तीन जनाको शव भेटियाे
काठमाडौं । नव नियुक्त कानूनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी छिन । तुम्बाहाङ्फेले सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनियाताको शपथ ग्रहण गरेसँगै पदभार ग्रहण गरेकी हुन । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेकी हुन ।
तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बलात्कारको अभियोगमा बाध्यात्मक रुपमा पद त्याग गरेसँगै रिक्त पदमा डा. तुम्बाहाम्फेको चर्को दाबी रहेपनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समिकरणले उनको चाहना पूरा हुन सकेन । उपसभामुखबाट राजीनामा दिदैं नेकपाको पोल्टामा सभामुख पार्नको निम्ति उनले गरेको त्यागलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारीले परिपूर्ती गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीले पूरा गरेका छन ।
काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडप...
काठमाडौं । कैलालीको बेला जंगलमा दुई युवती मृत अवस्...
काठमाडौं । प्युठानमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा दुई जना...